> Resource > Lugood > Top 3 Free Lugood Lyrics Widgets u Mac
Waxaad u baahan doontaa in lyrics music oo dhan si aad u isticmaali kartaa widgets kale inay muujiyaan lyrics. Qalabkani waxa uu, si kastaba ha ahaatee, ka raadin kartaa oo kala soo bixi lyrics in aad heeso oo dhan si toos ah. Sii isku day ah oo aad ka heli doonto wax kadis ah oo dheeraad ah. Baro More >>
Lugood badan oo widgets lyric ma sii dheer waxaa laga heli karaa wax ka badan oo ay sabab u tahay arrinta copyright ama kooxda horumariyo siinayaa ilaa mashruuca, sida widget Harmonic iyo Lyric Widgets Gurtida u Mac. Nasiib wanaag, Annagu waxaan imtixaannay saddexdan lyrics widgets ee Lugood dambeeyay (10.5) ee Mac 10.6.8 (Snow Leopard). Dhammaan iyaga ka shaqeeya. Dooro Lugood lyrics jecel Widget inay gabyaan in Lugood.
Tani lyric Lugood widget oo keliya ka shaqeeya mashiinada Mac. Interface waa sida fudud ee suurtogalka ah - badhamada wax yar uun ka mid ah. Iyadoo Hel fanka, aad si fudud ku dari kartaa lyrics in ay haatan u ciyaara kooxda track song ama doorashada ka mid ah kuwan raadkaygay. Si aad u aragto lyrics, guji badhanka isha. Iyadoo badhanka tagging Active, aad si toos ah u heli karaan lyrics loogu heeso marka aad iyaga u ciyaaro. Tani hubaal waa Lugood widget lyric in aadan ka maqnaan, inkastoo ay mararka qaarkood burburi doonaa.
Tani waa widget Mac Dashboard ah in uu soo bandhigo lyrics u heesta oo hada ka ciyaara. Gacanta Basic badan songs Lugood waxaa kaloo la siiyaa si aad si fudud u heesi kartaa in habayn soo socda. Album cover farshaxanka laga demin karin ama badhanka midig sare. Guji ee "i" button u door bidaan in ka badan sida font, style, database lyric, iwm By default, MetroLyrics iyo database Utamap waxaa inta badan loo isticmaalaa Ingiriisi iyo lyrics Japan. waxaa halkan .
Talooyin: Sida loo saar Dashboard Widgets
1. In Dashboard (ay isla F4 in la furo), kordhin Widget Bar adigoo riixaya badhanka calaamada togane.
2. Riix badhanka ee Maamul Widgets ama guji badhanka widget Widgets si ay u muujiyaan liiska oo dhan widgets aad ku rakiban.
3. Markaas riix linkiga u qaad oo cas si meesha looga saaro widget muraayada rakibay in qashinka.
Tani widget ka Yahoo ma aha oo kaliya lyrics ah widget. Waxay u baahan tahay Yahoo Widgets (codsiga yar si loo soo dajiyo widgets kale) lagu rakibay on your Mac ama Windows. Ka sokow soo bandhigeen lyric for wadada haatan u ciyaara kooxda, waxaa kale oo kuu ogolaanaya inaad si ay u sameeyaan lyrics karaoke-style iyo baadhaa Amazon.com u dabool album farshaxanka. Waa ay widgets lyrics ugu awooda badan dhexdooda saddex widgets Lugood.